Quiche nwere salmon, broccoli na cheese ewu | Bezzia
Quiche na salmon, broccoli na cheese ewu
Maria onyekwere | 05/10/2021 10:00 | Salads na akwụkwọ nri, Gaa
Na Bezzia anyị nwere mmasị na Quichés. Bụ savory tarts Anyị na -ahụ ha ka ọ bụrụ nnukwu ihe ọzọ dị ka onye mbido mgbe anyị nwere ndị ọbịa, kamakwa ọ bụ nnukwu isi nri ịkekọrịta ụbọchị ọ bụla n'izu. Na nke anyị nwalere nke a salmon, broccoli na cheese cheese quiche ọ bụ ọkacha mmasị anyị.
Ụdị ihe nabata ọtụtụ nzacha, yabụ na ha zuru oke iji ohere nke foduru anyị nwere n'ime ngwa nju oyi. N'okwu a, salmon ọhụrụ, broccoli na chiiz ewu bụ ihe bụ isi. Na mgbakwunye, anyị akwadebekwara mgwakota agwa n'ụlọ.
Ntụziaka maka quiche Ọ dị mfe ịkwadebe mana ọ bụrụ na ịnweghị oge iji mee ya ma ọ bụ na ị na -ahọrọ ụzọ dị mfe ma ọ bụ karịa, ị nwere ike ịkụ nzọ na ụzọ mkpirisi azụmaahịa ma ọ bụ mgwakota agwa puff puff. Anyị enweghị ike ikwu na nsonaazụ ya bụ otu mana ọ dịkwa mma.
150 g nke ntụ ọka wit
75g bọta oyi
1 tablespoon nke mmanụ olive
1/2 obere yabasị, minced
180g. broccoli na okooko osisi
80 g. grated chiiz
280g. ọhụrụ salmon
Mpekere 5 nke cheese cheese
190 ml. ude maka isi nri
190 ml. mmiri ara ehi niile
Gwakọta ntụ ọka na bọta n'ime nnukwu efere n'ime cubes ma rụọ ọrụ, ma ọ bụ jiri igwe okwu ma ọ bụ jiri aka gị, na -ata mgwakota agwa ahụ, ruo mgbe ị ga -enweta ntụpọ aja.
Emechaa tinye akwa, oge ma tinye mmiri mmiri ngaji abụọ. Gwakọta dị ka ọ dị mkpa iji jikọta ihe ndị mejupụtara ma mepụta bọọlụ.
Ozugbo emere, tinye mgwakota agwa n'ime ngwa nju oyi ma hapụ ya ka ọ nọdụ otu awa.
Mgbe, obụpde bŕocoli nkeji 4 n'ọtụtụ mmiri nnu. Ka oge na -aga, kpoo mmiri nke ọma ma debe ya.
Mgbe ah sauté n'ime pan na 1 tablespoon mmanụ olive leek na yabasị maka nkeji ise.
Emechaa gbakwunye broccoli na garlic na esi nri maka minit ole na ole ọzọ. Mgbe nke ahụ gasị, wepụ pan ahụ na ọkụ wee debe ya.
Kpochapu oven na 180ºC.
Kwapụta mgwakota agwa ahụ ma tinye ahịrị 26 cm n'obosara gburugburu quiche ebu ma ọ bụ 36 × 13 elongated nwere ntọala mbughari.
Mgbe ah sụ ndu ojọgu iya, debe mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ n'elu wee jupụta bọọlụ ma ọ bụ akwụkwọ nri.
Ime na isi n'oge nkeji iri abụọ.
Jiri oge ahụ mee ihe tie ude na ude, mmiri ara ehi na nnu nnu, ose na nutmeg.
Mgbe nkeji iri anọ gachara wepụ ebu ahụ na oven ma wepụ ma bọọlụ ma ọ bụ akwụkwọ nri na akwụkwọ.
Debe chiiz grated na ntọala fesaa ya ngwakọta broccoli ị debere, salmon ọhụrụ a kpụrụ akpụ na chiiz ewu.
Imecha wunye ngwakọta a pịara apịa.
Ime 30 nkeji ma ọ bụ ruo mgbe akụkụ ya bụ ọla edo. Ozugbo emechara ya, jiri nlezianya wepu ebu.
Na -ejere salmon, broccoli na cheese ewu ka ọ dị ọkụ ma ọ bụ na -ekpo ọkụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ntụziaka » Gaa » Quiche na salmon, broccoli na cheese ewu
Chọpụta arịa bred si n'ụlọ Zara
Ekworo na anyaụfụ di na nwunye